(tonga teto avy amin'ny Victoire RASOAMANARIVO)
I Victoire Rasoamanarivo dia lahika malagasy, teraka teto Antananarivo tamin'ny taona 1848, ary anisany tena nifikitra indrindra tamin'ny finoana an'Andriamanitra. Izy dia zanaka vavin-dRainandriantsilavo sy Rambahinoro. Nivadi-pinoana ho kristianina izy teo amin'ny faha 15 taonany raha toa ka natao batemy tamin'ny 01 Novambra 1863, ary anisan’ny lasa mpandray ny Vatan'i Kristy ihany koa tamin'ny 17 Janoary 1864. Nandray ny Sakramentan'ny Fankaherezana izy ny 23 Septambra 1864. Nanambady an-dRandriaka, izay zanaka lahin'ny Praiminisitra Malagasy Rainilaiarivony, izy. Natao mariazy izy roa, izay nohamasinin'ny Pretra mitondra ny anarana hoe Finaz. Namorona fikambanana iray izy, dia ny Zanak'i Masina Maria na ZMM, ary izy no filoha tamin'izany fotoana izany.
Rehefa teo amin'ny taona 1883 dia noroahina ireo misionera frantsay nitondra ny fivavahana katolika teto Madagasikara, noho ny ady nisy teo amin'ny Frantsay sy ny Malagasy. Tsy nahasakana an'i Victoire Rasoamanarivo tamin'ny finoany izany, fa vao mainka aza nandrisika azy nifikitra tamin'Andriamanitra. Nanampy ny mahantra sy ny marary izy, izay niarahany tamin'ny Frera Raphël Louis Rafiringa izany. Nandalo fiainan-tsarotra goavam-be izy teo amin'ny fanambadiany noho ny fanitsakitsahana nataom-badiny azy; fa nananany kosa ny fandeferana na teo aza izany rehetra izany. Natao batemy anefa io vadiny io, rehefa niova fo, tamin'ny 14 Marsa 1888, ary tamin'io ihany koa no nahafatesany.
Ny 21 Aogositra 1894 kosa dia maty i Victoire Rasoamanarivo noho ny aretina mafy nahazo azy, ary nasitrika tao amin'ny fasan-dRainiharo. Noho ny zava-bitany nandritra ireo androm-piainany dia natsangan'i Papa Ray Masina, Joany Paoly faha-II, ho olon-tsambatra izy ny 30 Aprily 1989. Rehefa nahaleo tena i Madagasikara dia nafindra tao amin'ny Fasan'ny Misionera Ambohipo izy ny Septambra 1961 ary mbola nafindra tao amin'ny Sapely Andohalo ihany koa ny taolam-balony ny 22 Aogositra 1993.
Ny 21 Aogositra no Volana natokana hankalazana azy.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Victoire_Rasoamanarivo&oldid=976637"
Dernière modification le 8 Novambra 2019, à 13:54
Voaova farany tamin'ny 8 Novambra 2019 amin'ny 13:54 ity pejy ity.